Inta aadan ka hor imaan Mooshinka Jawaari bal Su’aalahaan hala waydiiyo!! | Inta aadan ka hor imaan Mooshinka Jawaari bal Su’aalahaan hala waydiiyo!! | Hal Sheegaha La Hubo
Inta aadan ka hor imaan Mooshinka Jawaari bal Su’aalahaan hala waydiiyo!!
Mar 16, 2018 - jawaab
Maxamad Cusmaan Jawaari, ayaa mooshin laga geeyey, in kasta oo tiro ahaan uu ku baaqday, haddana guux badan ayey dhalisay, oo waxaan arkay dad badan, oo taageero u haya Jawaari, haddaba, waxaan is weydiiyey sidan:
– Guddigii u dambeeyey, ee DALTUURKA naqdiimiyey, ka dib, markii uu ku soo falaaday Cabdi Xuush, haddana ah wasiirka dastuurka, ee magaciisu ahaa: GUDDIGA KHUBARADADA IYO DIYAARINTA DASTUURKA QABYO QORAALKA waxaa guddoomiye u ahaa Jawaari, waxaana la leeyahay waxaa ku baxay Soddon Milyan Dallar [30Milyan$], ee Jawaari ha ka jawaabo sida ay ku baxday?.
– Madaxweyne Rajab Dayib Erdogan ayaa Muqdisho noogu yimid, socdaalkii labaad ee sooyaalka soomaaliyeed, Turki iyo dunida galay. Wuxuu khudbo qurux badan ka jeediyey fadhi baarlamaanku lahaa, oo sida caadada u eheed ku shiray hool aad mooddo baar JILBAJABSI oo kale. Ordodan, oo ka xumaaday madax xeer dejin, in ay jilbojabsi ku shaqeeyaan, ayaa bulshada Soomaaliyeed u ballanqaaday, in uu dayactir iyo dib u habayn ku samayndoono xarunta baarlamaanka, guga xigana furitaankeeda uu isagu xarigga ka jari doono! Jawaari weydiiya meesha ay ka baxday ballanqaadkii Ordgan? In uusan ka baaqan dhanka Turki ani waan hubaa.
– Madasha Qaranka ee dawladdii hore ka marooqsatay go’aan ka gaaridda agaasinka hannaan socodka dawladnimo iyo aayaha dalka, muxuu ka yiri intii ay dhisneed?.
– Intii mooshin uu qabtay dawladdii hore, ee labo hirgahsay, laguna riday laba xukuumad, midna uu dhicisoobay, kii Xasan Sheekh Maxamuud laga gudbiyey, muxuu kaga duwan yahay kan isaga maanta laga gudbiyey?.
– Inta uusan mar labaad isu sharrixin xildhibaannimada, ayuu isaga oo dhallinyaro la hadlaa ku yiri:
“DHALLINYARADA SOOMAALIYEEDEEY NAGA RAALLI AHAADA!” isagoo raaciyey “FACII NAGA HORREYEY, WIXII AY NAGU BARBAARSHEEN, IDIN KU MA BARBAARIN KARNO!” wax yar ka dibna wuxuu ahaa xildhibaan, haddana, guddoomiyaha baarlamaanka. Hadalkan wuxuu ka hormarshay, in uu
fariistay, ee uu ka fekeray! Haddii uuusan ka fiirsan, kana fekerin, muxuu dhihi lahaa dhallinyarada? I cafi, ma feker iyo ka fiirsasho ayey u baahan tahay, adoo og, in aad gef gashay, welibana aad ku laabanee, falkii aad gefka ku gashay?.
– Sidii ay u billaabatay dawladdan guga iyo labada bil jirta, dalka waxay galisay fawdo iyo fadqalallo, Jawaari ma ka hadlay?.
– Ciidan iyo rayid ayey dawladdu dishay, qaarkoodna Shabaab ku sheegtay, Jawaari ma ka hadlay?.
– Waxaa la weeraray xarunta militeriga ee Haanta Dheer, ayna ku dhinteen lix askari, oo dawladdu magtooda bixisay, Jawaari ma ka hadlay?.
– Waxaa la weeraray seq dhexe iyo habeen madow guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo ahaa xubin firfircoon oo ka tirsan mucaaradka, Jawaari ma ka hadlay?.
– Weerarkaa waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan ciidanka dawladda, illaa haddana aan maydkooda la hayn meel lagu xabaalay, Jawaari ma ka hadlay?.
– Afduubka loo gaystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur, ee uu saddax maalin ku qafaalnaa
magaalada Muqdisho xeer iyo xukun la’aan, Jawaari ma ka hadlay?.
– Weerarkii har cad iyo maalin cadday guriga senotar Cabdi Cawaale Qaybdiid lagu weeraray, oo ah guddoomiyaha Guddiga labada aqal ee Dastuurka, Jawaari ma ka hadlay?.
– Wixii dhibaato ka dhacay dalkan, intii uu xilka hayey Jawaari meel uu mawqif muuqda ku yiri ani waa ii dhimman tahay, marka mooshinkiisu, in kasta oo banjaray, haddana,
waxba ii ma ahayn.
Giraantu ha wareegto.